UHerol Graham vs uJulian Jackson | Iintshatsheli zeWBC Middleweight
Herol Graham vs Julian Jackson (24/11/90). Le nto yenzeke kwiTorrequebrada Hotel kunye neCasino, eBenalmadena, eAndalucia, eSpain kwiNtshatsheli yeBhola yeHlabathi yamanqindi engenamntu. Zombini iimfazwe zinobunzima obuyi-160 lbs. Usompempe yayinguJoe Cortez.
UJackson, owayesakuba yintshatsheli yomlo wamanqindi obunzima obuphakathi obuphakathi wayephakamile ngokomzimba emva kotyando lwamehlo kwi-retina ekhutshiweyo. Ngenxa yokwenzakala kwangaphambili, le bout ayinakubanjwa e-United Kingdom. Lo mdlalo, uHerol Graham noJulian Jackson wabanjelwa eSpain.
Ukusukela ekuqaleni, uJackson wayesokola noGraham, engakwazi ukwenza nto inqaku. Ngamehlo akhe asekhohlo kufutshane, ugqirha okhalileyo wanika uJackson umjikelo omnye wokuqhubeka ngaphambi kokuba awuyeke. I-1: 13 ye-4 yomjikelo we-12 (ka-XNUMX), uJackson ngokungxama waphosa inqindi ngenjongo epheleleyo, yaza yafika.
UGraham ebebanda ngaphambi kokuba abethe i-canvas. Uhleli ngaphandle okwethutyana kangangexesha elithile kwaye bekukho inkxalabo malunga nelizwe laseGrahams. Wayevuka kungekudala emva koko konke kulungile.
Le punch ye-KO ithathwa njengenye yezona zigqibeleleyo zigqityiweyo kwimbali yebhokisi.
UGraham uthathe umhlala phantsi ngo-1998 enerekhodi lokulwa elinama-48-6, 28 KO kunye noJackson naye ngo-1998 enerekhodi yomdlalo wamanqindi wama-55-6, 49 eeKO. UJackson uthathwa njengomnye wabanqolobi abanzima kwimbali yomdlalo wamanqindi kubunzima obuphakathi kunye nobunzima obuphakathi, ngepesenti ye-KO engama-80.33%